Kuisa mari mune chaiyo yekuendesa kushambadzira software kune rako bhizinesi kwakakosha uye kunofanirwa kuve chikamu chakakosha chechero zano rekukura. Asi kuendesa kushambadzira software kudyara haisi nezve "kupfuma nekukurumidza" Iko kukosha kwakakosha.
Kuisa mari yekuendesa kushambadzira software uye tekinoroji zvese zviri pamusoro pekuwedzera bhizinesi rako uye kuwedzera purofiti pamusoro penguva refu. Uye, apo izvo zvinouya nemutengo, zvinogona kunge zvakaderera pane zvaunofunga.
Nekutumira kushambadzira software, hazvisi zvakanyanya nezve kuti unoshandisa marii; mashandisiro aunoita iwe. Iwe unoda chimwe chinhu chinoenderana nezvinangwa zvekambani yako uye zvinoita kuti basa rako rive nyore uye zvirinani? Iyo haifanire kuve yakakosha kudyara. Izvo zvese zvinouya pasi pakuita sarudzo yakanakisa.
Nemarezinesi anodhura chero kupi kubva pamasendi mashoma kusvika kuzviuru zvemadhora; uye imwe ine mubhadharo wekubvisa-imwe, pamwe nevamwe vachiita mutero unodzokororwa pamwedzi, hazvina kumbove zvakakosha kuti uyedze zvese zvingasarudzwa usati waisa mari mukutumira kushambadzira softwares.
Kunyangwe iwe uine yekutanga kana uri CEO weakawanda-makomisheni mashandiro, kwete wese munhu anotenda iyo hype iyo yekudyara mukutumira kwekushambadzira software inokurudzira bhizinesi kukura uye kuti zviri pachena kuchengetedzeka kwakachengeteka kune chero bhizinesi.
verenga Martech ZoneChinyorwa Nezve Referral Fekitori
Izvi pakupedzisira zvinoreva kuti vane nguva yakawanda yekushanda pane mamwe mabasa akakosha sekushanda nevatengi uye kutengesa. Paunenge uine tekinoroji nyowani, iwe zvakare uchave nekuwana nzira nyowani dzekukunda mamwe makambani - kungave kuri kuburikidza neazvino matekiniki ekushambadzira, sisitimu ine simba, kana kugadziridzwa kugadzirwa.
Kazhinji, isu tinohaya vanhu kuti vaite zvinonetesa uye zvinosemesa mabasa, chete nekuti zvinoita senge nzira yekushomeka. Asi yechipiri yatinotanga kutsvaga mhinduro dzemabasa ekushambadzira aya, tinoona kuti mazhinji acho anogona kugadzirirwa pasina muripo. Izvi zvinobvumidza zviwanikwa zvedu zvevanhu kuti titarise pane zvekutengesera mabasa asingakwanise kuita otomatiki.
Anoshanda zvakanyanya ekushambadzira evashandi, ayo, pamusoro pezvese zvimwe, anofara kusaitirwa basa remazuva ese. Nekutenga chaiyo yekuendesa kushambadzira software, iwe uchaona munguva pfupi kuti ivo vanogara vachiburitsa kutumira kwekushambadzira matsva. Zvirongwa zveSoftware zvinowanzo kuburitswa kuti basa riwedzere kushanda, kuunza maficha, uye kugadzirisa ruzivo rwevashandisi (UX).
Paunenge uchifunga zvekuisa mari mubhizinesi rako, funga izvo zvinozobatsira kuti ikure nekukurumidza uye nekurongeka. Nekudyara muinotumira kushambadzira software, urikuisa mari mune izvo zvinogona zvese zvekutumira kushambadzira software uye yako wega kambani.
Paunodyara mukuendesa kushambadzira software, iwe uri kugadzira yakareba-nguva yekudyara kune rako bhizinesi. Chinhu chikuru nezvekudyara mukuendesa kushambadzira software ndechekuti mabhenefiti anogona kugara kwemakore. Sezvo yechitatu-bato software iwe yaunodyara mukati inovandudzika mukuita uye kugona, inongokura mukukosha uye hurefu.
Nepo tekinoroji isiri iyo yakanyanya kugadzikana chikamu, ndiyo iri kugara ichikura. Kuisa mari mune software iyo inogadzirisa bhizinesi rako maitiro hakuwanzo kuita sarudzo isiriyo.
Kuisa mari mukutumira kushambadzira Software Platform - Kutenga mune kuendesa kushambadzira software chirongwa kana SaaS zvinoreva kuti uri kuisa hwaro hwekubudirira kwebhizinesi rako. Mari yaunoshandisa izvozvi inokura mukukosha sezvo bhizinesi rako richibatsirwa kubva mukudyara.
Nenzira yemuenzaniso, mari iwe yaunogadzira kwegore muchirongwa chekutengesera software kana SaaS inogona kuburitsa mibairo yakakura kwazvo kupfuura kudyara mushandi anongoshanda kukambani yako isingasviki gore. Shanduro yevashandi ine yakawanda kwazvo inosanganisirwa mitengo. Nekutumira kushambadzira software, iyoyo haisi nyaya.
Kana iwe ukaita ruzivo rwekutengesa kushambadzira software sarudzo dzekudyara, iwe unozogadzira hunyanzvi hukama nekambani iwe yaunosarudza. Iwe zvakare ungangove unokwanisa kubatana nekubatana nemamwe mabhizinesi anoshandisa zvakafanana kana zvakafanana tekinoroji.
Pamwe pamwe nekuita basa, iyo chaiyo yekuendesa kushambadzira software inogona kuwedzera kugadzirwa. Izvi zvinonyanya kuitika kana iyo yekushambadzira yekushambadzira software iwe yaunodyara mukati ichirerutsa yako yazvino SOPs uye ichipa mamwe mabhizinesi maitiro anoenderana. Zvichienderana nezvakatumirwa kushambadzira software yaunosarudza kuisa mari mairi, ungangodaro unowedzera kugadzirwa kwesystem yako nevashandi.
Chaizvoizvo, urikutenga nguva yemushandi wako, uye uchivapa imwe nguva kuti vabudirire mukuita zvitsva zvitsva.
Paunenge uchishandisa iyo yazvino, software ine marezinesi kana yechitatu-bato SaaS zvigadzirwa kuti utarisire ako ezuva nezuva mashandiro, kambani yako inoshanda nekuchengetedzeka pakati payo. Iwo ekutumira ekushambadzira software makambani auri kuisa kuvimba kwako mauri, iwe unofanirwa kukoshesa iyo kuvimba zvakanyanya. Kuzivikanwa kwavo kunozorora pakuchengeta yako data; uye iyo data yevatengi vako yakachengeteka.
Iyo ingori imwe nzira yekudyara mureferensi kushambadzira software zvine musoro sesarudzo yenguva refu. Iwe unowedzera kambani yako uchichengetedza zvinhu zvako, mazano, uye data revatengi. Kunyangwe kana mutengo weimwe yekuendesa kushambadzira software chigadzirwa chichiita kunge chakakwira, zvakakodzera kukosha kana zvoreva kuchengetedzwa. Kazhinji, kuisa mari mune chaiyo yekuendesa kushambadzira software kunogona kugadzira kana kuputsa bhizinesi.
Bhizinesi rega rega rinofanirwa kutora matanho akakodzera ekuchengetedza ruzivo rwakavanzika rwavari kuchengeta. Kuisa mari muzvirongwa zvinodzivirira data revatengi risinganzwisisike haisi nzira chete yekudzora njodzi yekutyorwa kwedata, asi inogona zvakare kushanda senzvimbo yekutengesa kana uchisimudzira bhizinesi rako kune vatengi.
Nekombiki itsva inouya nemikana mitsva. Zvese zvinosvika apa zvinotaura mukana wekukura nekusimudzira. Izvo zvese ichokwadi.
Hechino chokwadi; makambani chete uye zvigadzirwa zvinoshanduka zvinokwanisa kurarama kumusoro uye kwakadzika kwehupfumi hwenyika. Paunoita sarudzo dzinofambira mberi nemari yebhizinesi rako, iwe uchaona rako bhizinesi haringorarame; ichabudirira. Pasina kuendesa kushambadzira software yekudyara, kambani yako inokundikana nekuti haizokwanisi kukura.
Kunyangwe izvo zvichireva diki Software seSevhisi (SaaS) kutenga kugadzirisa masisitimu ako kana kudyara mukudyidzana kwenguva refu nekambani yekushambadzira software, hazvirambike hapana nguva senge iripo kuti ubvunze mibvunzo yakaoma. Paunenge uchinge waisa chiratidzo kwaunofanirwa kuenda yako yekudyara, inguva yekuita kuti zviitike.